२ वटा गीतमा नाच्दा नै खुशी आँँचल !आँचलले २ वटा गीतमा नाच्नु नै ठूलो कुरा हो त ? – An Online Entertainment News Portal
HomeGalleryCelebrity२ वटा गीतमा नाच्दा नै खुशी आँँचल !आँचलले २ वटा गीतमा नाच्नु नै ठूलो कुरा हो त ?
अभिनेत्री आँचल शर्माको दाल भात तरकारीको रोल हेरेर उनीमाथि प्रश्न उठाइएको छ । दाल भात तरकारी फिल्ममा उनले किन काम गरिन् ? आफ्नो भूमिका किन हेरिनन् भनेर प्रश्न उठाइएको छ ।
आँचलले भने यसको बचाउ गरेकी छिन् । उनले, संचारमाध्यममा दिएको इन्टरभ्यूमा आफू नै फिल्मको हिरोइन भएको भनेकी छिन् । आफूलाई नै फिल्मका निर्माताले मुख्य हिरोइन भनेको, सिनेमाको २ वटा गीतमा आफू देखिएको भनेर उनले भनिन् । आँचलले २ वटा गीतमा नृत्य गर्न पाउँदा आफूले डान्स देखाउन पाएको पनि भनिन् ।
तर, आँचलले अब सिनेमा नै बोक्ने बेलामा २ वटा गीत पाउँदा पनि फुरुङ्ग हुनुपर्ने हो र श्र आँचल शर्मा नेपाली फिल्मको कलाकारमा नाम सुनिएकी कलाकार हुन् ।
उनलाई सिनेमाको मुख्य अभिनेत्री नै बनाउन चाहन्छन् निर्माता । तर, आँचल भने म्यूजिक भिडियोमा नाचे जस्तै आफूले फिल्मको २ वटा गीतमा नाच्न पाएको र यो नै ठूलो कुरा भएको बताउँदै छिन् । आँचलका लागि फिल्मको २ वटा गीतमा नाच्नु नै ठूलो कुरा भयो र ?
नायिका ऋचा शर्माको दशैँ टिका ( फोटो फिचर ) नायिका रेखा थापाको दशैँ टिका ( फोटो फिचर )